Zụta ihe osise YouTube - SoNuker
Omenala Eserese Nhọrọ:
1 Ọkọlọtọ ọkọlọtọ
1 Ekike vidiyo thumbnail
$ 25 Zụta ugbu a
3 Ngosipụta vidiyo vidiyo
$ 70 Zụta ugbu a
6 Ngosipụta vidiyo vidiyo
$ 130 Zụta ugbu a
Ndi oru mgbasa ozi okacha amara na vidiyo ga-emezi ka owa m di nma?
Kedu otu o si dị mkpa iji chepụta thumbnails vidiyo ọkachamara?
Ọ bụrụ n ’ile anya, ị ga - ahụ na isi YouTubers niile na - eji obere vidiyo eji eme ihe iji mee ka vidiyo ha gbapụta yana ka ịpịkwuo. Ogo, thumbnails omenala na-eme ka vidiyo gị pụọ na vidiyo ndị nwere ike ịnwe ọtụtụ echiche ma ọ bụ bụrụ ndị a ma ama karịa nke gị. Ọbụna ma ọ bụrụ na vidiyo gị dị obere na nsonaazụ ọchụchọ ahụ, thumbnail omenala ga-adọta uche ha wee gbaa ha ume ileta vidiyo gị. Omenala thumbnails na - enyere aka melite ogo ogo YouTube na Google gi, si otua na --emere gi otutu ihe ahia.
Nwere ike iji ụdị ọwa YouTube ọ bụla rụọ ọrụ?
Gịnị ma ọ bụrụ na m na-adịghị amasị imewe, ma ọ bụ chọrọ mgbanwe?